मार्क जुकरवर्ग नै एमालेमा प्रवेश ! - ICT Frame Technology
वर्तमान सरकारलाई आईसियुमा भएको र एअर एम्बुलेन्स चढ्न तयार भएको दावी उनले गरे । यो सरकार आईसियुमा छ, यसलाई बचाउन अनेक प्रयत्न भईरहेका छन, जति गरेपनि यो बाँंच्नेवाल छैन, जेठ १ गते यो एआर एम्बुलेन्स चढ्छ’ उनले भने गच्छदारको पार्टी सरकारमा जानुलाई सरकार बचाउने असफल प्रयास भएको उनले टिप्पणी गरे। जेठ १ गते यो सरकार जान्छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन एमालेले गराउनु पर्ने अवस्था आउछ , तपाईहरुलाई म आज यति मात्र भन्छु उनले भने ।
साभार: नेपाल पाटी
Previous Post Previous post: सामाजिक संजालमा छुट्टै निर्वाचन गर्नु पर्ने देखियो !
Next Post Next post: भारतीय बजारमा ‘इन्ट्री गर्न’ २-२ अर्ब लगानी गर्दै नोकिया र ब्लाकबेरी
अब कम्प्युटरबाटै मोबाइल चलाउन मिल्ने
surencool4 July 1, 2016 July 1, 2016